ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အုပ်စုကျပ်ထဲ ကျရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ မန်ယူ
ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုကျပ်ထဲကျရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့ မန်ယူ
30 Aug 2018 . 11:42 AM
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရုန်းကန်နေရတဲ့ မန်ယူအသင်းဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုကျပ် (Group Of Death)ထဲ ကျမယ့်အနေအထား ရှိနေလို့ မော်ရင်ဟို Mourinho အတွက် ‘မြွေပူရာ ကင်းမှောက်’ ဆိုသလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် မဲခွဲပွဲအခမ်းအနားကို ဒီနေ့(ကြာသပတေး) မြန်မာစံတော်ချိန် ည(၁၀း၃၀)ကျရင် မိုနာကိုမှာရှိတဲ့ Grimaldi Forum မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ လာလီဂါထိပ်သီး အသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ် (ဒါမှမဟုတ်) ဘာစီလိုနာ၊ မိုနာကို၊ အင်တာမီလန်တို့နဲ့ တစ်အုပ်စုတည်း ကျရောက်မယ့်အနေအထား ရှိနေတာပါ။
မန်ယူအသင်းဟာ မဲအိုး(၂)မှာ ပါဝင်နေပြီး မဲအိုး(၁)ကအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ ရီးယဲလ်၊ ဘာစီလိုနာ၊ အက်သလက်တီကို၊ ဘိုင်ယန်၊ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ PSG ၊ လိုကိုမိုးတစ်မော်စကိုတို့ထဲက အသင်းတွေနဲ့ ဆုံတွေ့ရမယ့် အနေအထားပါပဲ။ မဲအိုး(၁)ထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံ မန်စီးတီးအသင်း ပါဝင်ပေမယ့် နိုင်ငံတူအသင်းတွေ တစ်အုပ်စုတည်း မကျဖို့ UEFA က သတ်မှတ်ထားတာလို့ မန်ချက်စတာနှစ်သင်း ဆုံတွေ့စရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မန်ယူသာမကဘဲ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေဖြစ်တဲ့ မန်စီးတီး၊ လီဗာပူးလ်၊ စပါးအသင်းတို့ အားလုံး မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ အုပ်စုကျပ်ထဲ ရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေ ရင်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စု အနေအထားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗြိတိန်နာမည်ကျော် သတင်းစာ Daily Mail က အခုလိုပဲ သုံးသပ်ဖော်ပြခဲ့တယ် . . .
အုပ်စုချောင် – ပေါ်တို၊ CSKA မော်စကို ၊ AEK အေသင်
အုပ်စုကျပ် – ဒေ့ါမွန်၊ ဗလင်စီယာ၊ အင်တာမီလန်
အုပ်စုချောင် – လိုကိုမိုးတစ်မော်စကို၊ အေဂျက်စ်၊ AEK အေသင်
အုပ်စုကျပ် – ရီးယဲလ်၊ ရှော်လ်ကေး၊ အင်တာမီလန်
အုပ်စုကျပ် – ရီးယဲလ်၊ မိုနာကို၊ အင်တာမီလန်
အုပ်စုချောင် – လိုကိုမိုးတစ်မော်စကို၊ ပေါ်တို၊ AEK အေသင်
အုပ်စုကျပ် – ရီးယဲလ်၊ ဒေါ့မွန်၊ အင်တာမီလန်
ချန်ပီယံလိဂ် မဲခွဲပုံကိုလည်း ပရိသတ်တွေ ပြန်ပြီး အမှတ်ရနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ အသင်း(၃၂)သင်းကို အုပ်စု(၈)အုပ်စုခွဲ၊ အသင်းတွေကို အဆင့်လိုက် မဲအိုး(၄)အိုးထဲမှာ ထည့်သွင်းပြီး Random မဲနှိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းအသင်းအချင်းချင်း အုပ်စုတွင်းမှာ မကျဖို့ UEFA က သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မဲအိုး (၁)မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ချန်ပီယံ၊ ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံအသင်းတို့ကို ထည့်သွင်းပြီး ကျန်တဲ့အသင်းတွေက ဥရောပထိပ်သီးလိဂ်(၆)ခုက အမှတ်ပေးချန်ပီယံအသင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မဲအိုး(၂၊ ၃၊ ၄) မှာတော့ အသင်း(၂၄)သင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက လိဂ်ပြိုင်ပွဲရပ်တည်မှုအလိုက် UEFA က Seeding သတ်မှတ်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ .. ပရိသတ်ကြီးရေ .. ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်မဲခွဲပွဲက ဒီနေ့ ညမှာ ပြုလုပ်တော့မှာပါ၊ ဘယ်အသင်းတွေ ဘယ်လိုအုပ်စုထဲ ကျရောက်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . . . .
ခနျြပီယံလိဂျ အုပျစုကပျြထဲကရြောကျဖို့ရှိနတေဲ့ မနျယူ
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ရုနျးကနျနရေတဲ့ မနျယူအသငျးဟာ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲ အုပျစုကပျြ (Group Of Death)ထဲ ကမြယျ့အနအေထား ရှိနလေို့ မျောရငျဟို Mourinho အတှကျ ‘မွှပေူရာ ကငျးမှောကျ’ ဆိုသလိုဖွဈနပေါပွီ။ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျ မဲခှဲပှဲအခမျးအနားကို ဒီနေ့(ကွာသပတေး) မွနျမာစံတျောခြိနျ ည(၁၀း၃၀)ကရြငျ မိုနာကိုမှာရှိတဲ့ Grimaldi Forum မှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ မနျယူအသငျးဟာ လာလီဂါထိပျသီး အသငျးတှဖွေဈတဲ့ ရီးယဲလျ (ဒါမှမဟုတျ) ဘာစီလိုနာ၊ မိုနာကို၊ အငျတာမီလနျတို့နဲ့ တဈအုပျစုတညျး ကရြောကျမယျ့အနအေထား ရှိနတောပါ။
မနျယူအသငျးဟာ မဲအိုး(၂)မှာ ပါဝငျနပွေီး မဲအိုး(၁)ကအသငျးတှဖွေဈတဲ့ ရီးယဲလျ၊ ဘာစီလိုနာ၊ အကျသလကျတီကို၊ ဘိုငျယနျ၊ ဂြူဗငျတပျဈ၊ PSG ၊ လိုကိုမိုးတဈမျောစကိုတို့ထဲက အသငျးတှနေဲ့ ဆုံတှရေ့မယျ့ အနအေထားပါပဲ။ မဲအိုး(၁)ထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံ မနျစီးတီးအသငျး ပါဝငျပမေယျ့ နိုငျငံတူအသငျးတှေ တဈအုပျစုတညျး မကဖြို့ UEFA က သတျမှတျထားတာလို့ မနျခကျြစတာနှဈသငျး ဆုံတှစေ့ရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ မနျယူသာမကဘဲ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှဖွေဈတဲ့ မနျစီးတီး၊ လီဗာပူးလျ၊ စပါးအသငျးတို့ အားလုံး မထငျမှတျဘဲနဲ့ အုပျစုကပျြထဲ ရောကျဖို့ရှိနပေါတယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှေ ရငျဆိုငျရနိုငျတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစု အနအေထားနဲ့ပတျသကျပွီး ဗွိတိနျနာမညျကြျော သတငျးစာ Daily Mail က အခုလိုပဲ သုံးသပျဖျောပွခဲ့တယျ . . .
အုပျစုခြောငျ – ပျေါတို၊ CSKA မျောစကို ၊ AEK အသေငျ
အုပျစုကပျြ – ဒေ့ါမှနျ၊ ဗလငျစီယာ၊ အငျတာမီလနျ
အုပျစုခြောငျ – လိုကိုမိုးတဈမျောစကို၊ အဂေကျြဈ၊ AEK အသေငျ
အုပျစုကပျြ – ရီးယဲလျ၊ ရှျောလျကေး၊ အငျတာမီလနျ
အုပျစုကပျြ – ရီးယဲလျ၊ မိုနာကို၊ အငျတာမီလနျ
အုပျစုခြောငျ – လိုကိုမိုးတဈမျောစကို၊ ပျေါတို၊ AEK အသေငျ
အုပျစုကပျြ – ရီးယဲလျ၊ ဒေါ့မှနျ၊ အငျတာမီလနျ
ခနျြပီယံလိဂျ မဲခှဲပုံကိုလညျး ပရိသတျတှေ ပွနျပွီး အမှတျရနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။ အသငျး(၃၂)သငျးကို အုပျစု(၈)အုပျစုခှဲ၊ အသငျးတှကေို အဆငျ့လိုကျ မဲအိုး(၄)အိုးထဲမှာ ထညျ့သှငျးပွီး Random မဲနှိုကျတာပါ။ ဒါပမေဲ့ တဈနိုငျငံတညျးအသငျးအခငျြးခငျြး အုပျစုတှငျးမှာ မကဖြို့ UEFA က သတျမှတျထားပါတယျ။ မဲအိုး (၁)မှာ ခနျြပီယံလိဂျ ခနျြပီယံ၊ ယူရိုပါလိဂျခနျြပီယံအသငျးတို့ကို ထညျ့သှငျးပွီး ကနျြတဲ့အသငျးတှကေ ဥရောပထိပျသီးလိဂျ(၆)ခုက အမှတျပေးခနျြပီယံအသငျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ မဲအိုး(၂၊ ၃၊ ၄) မှာတော့ အသငျး(၂၄)သငျးကို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက လိဂျပွိုငျပှဲရပျတညျမှုအလိုကျ UEFA က Seeding သတျမှတျပွီး အဆငျ့သတျမှတျပေးတာဖွဈပါတယျ။ ကဲ .. ပရိသတျကွီးရေ .. ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျမဲခှဲပှဲက ဒီနေ့ ညမှာ ပွုလုပျတော့မှာပါ၊ ဘယျအသငျးတှေ ဘယျလိုအုပျစုထဲ ကရြောကျမလဲဆိုတာ ရငျခုနျစှာနဲ့ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . . . .